स्वास्थ्य Archives - Nepal Aawaaj
२४ वैशाख, विराटनगर । चैत तेस्रो साता । बेलबारी नगरपालिका-४ मोरङका नवीन खवास, बुबाको उपचारका लागि नोबेल मेडिकल कलेज आइपुगे । उपचारपछि बुबा विनोद वैशाख १५ गते डिस्चार्ज भए । बुबालाई घर...	Read more »
कोरोनाको महामारीमा अचानक छाती दुखे जस्तो हुँदा के गर्ने?अनिवार्य जानकारी लिई राख्नुहोस्
Moon Sampang Rai — May 6, 2021 add comment
काठमाडौं !!नेपाल आवाज छाती दुख्ने धेरै कारण हुन्छन्। बाहिर छालादेखि भित्र फोक्सोसम्मको समस्याले छाती दुख्छ। कसैलाई चोटपटक लाग्यो भारी काम भयो हड्डीको समस्या अनि मांसपेशी तानिएर तथा जनै खटिरा आउँदा पनि छाती...	Read more »
के हो अक्सिजन लेवल : घरमै कसरी बढाउने- कति हुँदा अस्पताल जाने ? डा. किदवाईको सुझाव
काठमाडौ । बाँके नेपालगन्जका विष्णु प्रसाद पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा डाक्टर मोईउद्दिन किदवाईसंग गरेको कुराकानी पछि आफ्नो फेसवुकमा लेख्नुभएको स्टाटस अहिले कोरोना महामारीमा सर्वसाधारणका लागि उपयोगी हुने ठानेर साभार गरिएको हो ।...	Read more »
होम आइसोलेसनमा सास फेर्न गाह्रो भए डा.रबिन्द्र पाण्डेका यी १oसुझाव पढ्नुहोस् !
थर्ममिटरबाट तापक्रम नापिरहनुहोला। ९८ – ९९ फरेनहाइटसम्म व्यक्ति अनुसार नर्मल तापक्रम हो। १०० पुग्यो भने पारासिटामोल खानुहोला। शरीर दुखेमा र टाउको दुखेमा पनि पारासिटामोल खान सकिन्छ। २. पल्स अक्सिमिटरबाट अक्सिजनको स्तर नापिरहनुहोला।...	Read more »
रुघाखोकीको भाइरसले मार्छ कोरोना भाइरस ?
Moon Sampang Rai — April 28, 2021 add comment
कोरोना भाइरसको दोस्रो रुपले संसारमा त्रास फैलाइरहेको छ । विभिन्न उपायका बावजुद यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको छैन । यस्तो स्थितिमा एउटा नयाँ आशा पलाएको छ । वैज्ञानिकले रुघाखोकी लगाउने रायनोभाइरस (rhinovirus )...	Read more »
भर्खरै यस्तो घोषणा, काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय, अति आवश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द !
१३ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा लाग्ने भएको छ । वैशाख १६ गते राति १२ बजेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा खाद्यपदार्थ र औषधि पसलबाहेकका पसल बन्द गर्ने र...	Read more »
नयाँ कोरोनाका बिरामी ह्वात्तै बढेपछि औषधि र अक्सिजन पाउँन छोड्यो, बिरामिहरु सिकिस्त हुँदै !
Moon Sampang Rai — April 26, 2021 add comment
नयाँ को-रोनाका बिरामी ह्वात्तै बढेपछि औषधि र अक्सिजन पाउँन छोड्यो, बिरामिहरु सिकिस्त हुँदै ! को- रोना संक्रमण समुदायस्तरमै तीव्र फैलिँदै जाँदा रोकथाममा अत्यावश्यक मानिने खोप, रेम्डेसिभिर र अक्सिजन चरम अभाव खड्किएको छ...	Read more »
Moon Sampang Rai — April 23, 2021 add comment
नेपालगञ्ज। बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीलाई उपचारका लागि भर्ना गर्न कोभिड अस्पतालमा शय्या अभाव भएको छ । अस्वाभाविकरूपमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएपछि नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पताल र कोहलपुरस्थित शिक्षण अस्पताल भरिभराउ भएको छ । भेरी...	Read more »
Moon Sampang Rai — April 21, 2021 add comment
भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र भारतमा २ लाख ५९ हजारभन्दा बढी मानिसमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस अवधिमा १ हजार...	Read more »
भारतबाट फर्केका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कोरोना संक्रमण, निर्मलनिवासमै सेल्फ आइसोलेसनमा
Moon Sampang Rai — April 20, 2021 add comment
भारतको हरिद्वारमा कुम्भमेलामा स्नान गरेर फर्केका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वरानी कोमल राज्यलक्ष्मी शाहमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । भारतबाट फर्केपछि कोभिड-१९ पीसीआर जाँच गर्दा दुबैमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको पूर्वराजाका निजी सहयोगी...	Read more »